Idangabane elinguWoods livuke qingqo | Bayede News
Home/ Ezemidlalo/Idangabane elinguWoods livuke qingqo
EzemidlaloKuleli sonto kwelaboHlanga
E SIZULWINI umuntu ophumelela sekuvalwe amehlo ngaye, kuye kuthiwe uwumafavuke njengedangabane. Lokhu kungasetshenziswa ukuchaza okwenzeke kumanqoba wegalofu uTiger Woods.
Le nsizwa eneminyaka engama-43, u-Eldridge “Tiger” Woods, usanda kuphumelela omunye wemincintiswano emikhulu yegalofu, i-US Masters. Unyaka nonyaka mine imidlalo emikhulu edlalwa ezingeni labakhokhelwayo, okuyi-US Masters, iThe Open eyayibizwa ngeBritish Open, i-US Open kanye nePGA Championship. Kwezegalofu noma ungaphumelela imincintiswano eminingi kanjani kodwa awuhlonishwa uma ungakaze uphumelele eminye yale mimcintiswano ebalwe ngenhla.
UWoods wagcina nge-US Open yowezi-2008 ukuphumelela kuleli zinga. Lapho kwaphoqeleka ukuthi badlale usuku olwengeziwe lwesihlanu emva kokudlala ngokulingana noRocco Mediate. Kulowo mdlalo wayexhuga ngenxa yezinhlungu ayezizwa.
Phakathi kwalokho kuphumelela ku-US Open nokudla umhlanganiso ku-US Masters lo mdlali othathwa njengenkosi yegalofu, singasho ukuthi ufe wavuka. Lo mdlali owaba seqhulwini ohlwini lwegalofu lomhlaba iminyaka engaphezu kweyishumi, wahlangabezana nezingqinamba abaningi ebezingabenza bamukele ukuthi sekuphelile ngabo. Nebala baningi ongoti begalofu abese bethi ngeke esabuyela ezingeni lokushisa izikhotha. Kwaze kwakholeka nokuthi ngeke esalibamba irekhodi likaJack Nicklaus lamaMajors ali-18.
UWoods ube namaMajors ali-14 ngaphambi kokuphumelela i-US Masters yangowezi-2019. Ezingqinambeni zakhe singabala amahlazo okuthi wayethenga abesifazane ngezi-$10 000 ukuthi balale naye, nokwamehlukanisa nonkosikazi nemali eningi. Akuphelelanga lapho. UWoods wahlinzwa idolo nomqolo kaningana. Yilapho-ke ngempela okwasekubonakla ukuthi akasoyiphinde abe yile nkunzi ezigwaza zonke. Phela amadolo nomqolo kubaluleke kakhulu kulo mdlalo.
UMfo kaWoods uke waxabana nengalo yomthetho lapho eke waboshelwa ukushayela edle izidakamizwa. Waziphendulela ngelithi wayephuze amaphilisi ezinhlungu njengomuntu owayesalashwa.
Nalabo abamthandayo babenakho ukungabaza “ukuvuka” kwalo mdlali ngenxa yokuthi wazama izikhawu eziningi ukubuyela emncintiswaneni kodwa kwala. Kweminye yemidlalo wayephoqeleka ukuhoxa kuyo ingakapheli.
Kubonakala uWoods egcine esizwa yizinto ezintathu: ukwamukela ukuthi kuzothatha isikhathi ukwelapheka, ukuqala phansi impilo yakhe yegalofu, kanye nokuzinika ithemba lokuthi okuﬁ sayo uma ukusebenzela kanzima kungafezeka.
Eminyakeni emibalwa eyedlule lo mdlali wamemezala ukuthi uyema egaloﬁ ni futhi akazi ukuthi usayobuyela yini. Wathi sekuyoya ngempumelelo yokwelashwa kwakhe nokunye. Kulokhu kuma emdlalweni, njengoba ebengaqali, umzimba wakhe uwunike ithuba elanele ukuthi uphole emva kokuhlinzwa iqolo. Uthatha lesi sinqumo nje wayesevele eshintshe umphathisikhwama wakhe weminyaka uSteve Williams. Ube eseshintsha nomqeqeshi wakhe.
Okokugcina, okubonakala kumsizile lo mdlali yinto ayevele enayo esamncane okuwukomelela ngokomqondo.
Igalofu umdlalo oncike kakhulu ekomeleleni ngokomqondo. Ukuzinika ithemba, ukungabheki eceleni okungakukhombisa izithikamezo, nokuzethemba yizinto ezibalulekile kakhulu.
Intatheli yeBAYEDE ike yakhuluma noMfundisi uSabelo Ndimande naye ongumdlali wegalofu, othe: “Ngesikhathi uTiger Woods ‘esebumnyameni’, belingangabazeki ikhono lakhe legalofu, kodwa into emsizile ukuzitshela ukuthi uzozinqoba izingqinamba abhekene nazo. Kuningi esingakufunda kuTiger Woods singabantu.”
Ukuthi lo mdlali usendleleni ebuyela esicongweni kubonakale ngokuthi nyakenye aphumelele umncintiswano weTour Championship, okuwumdlalo wokugcina ochungechungeni lonyaka wonke olubizwa ngeleFedex Cup.
Ukuphumelela kukaWoods i-US Master kufundise umhlaba wonke ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Isithombe sakhe anga indodana yakhe siqhathaniswe naleso sakhe angena noyise mhla ephumelela okokuqala i-US Masters eneminyaka engama-25. Abanye abaphawuli bathi ngowe-1997 wanga ubaba wakhe, namhlanje wanga indodana yakhe endaweni efanayo, emncintiswaneni ofanayo.
Kunanesifundo esibalulekile kulolu daba lukaWoods, okuwukubaluleka kwendima elinywa ngabazali empilweni yabantwana babo. Ubaba kaWoods wamgqugquzela esemncane umfana wakhe emhambisa kuyo yonke imincintiswano. Mhla uWoods ephumelela i-US Masters okokuqala, ubaba wakhe wayephikisane nemiyalelo yodokotela yokuthi angahambi indawo ende neyokuthi angahambi ngendizamshini.
Umdlalo olandelayo kaTiger Woods yiPGA Championship oqala mhla zili-16kuya zili-19 kuNhlaba eBethpage State Park eNew York.
Impi yemicibisholo nenkumba kusasa eClermont
Uqina thambo kweyomhlaba eJapan